हेल्लो सरकार, ग्यास दे !, बिना कसूरको सजायँ न दे !!
केही महिना देखि हामी नेपालीले बिना कसुर भोग्नु परेको अभाव र अन्यायको बारेमा हाल कोही अनभिज्ञ छैनन् । यसको चर्चा परिचर्चा विवाद र विरोध पनि त्यत्तिकै चल्दैछ । केही समय अघि देखि मेरा विदेशमा रहने केही फेसबुक-साथीहरूले फेसबुक र केहीले ईमेल मार्फत यस विषयलाई सम्बोधन गरेर ब्लगमा पोस्ट राख्न पनि सल्लाह दिई रहनु भएको थियो ।
दिन दहाडै ग्यासको गाडी ‘कब्जा’, मूलाधारका मानिएका पत्रिकाका विरोध र देशका वुद्धिजीवी वा दिग्गज वर्गको कुरो समेत नसुन्ने सरकारले म जस्तो साधारण व्यक्तिको ब्लगमा आँखा लगाउला वा त्यसमा छापिएको कुरालाई ‘गम्भीरता’का साथ लेला भन्ने सोच्नु म आफैलाई पनि हास्यास्पद लाग्थ्यो । तर फेरि मेरो नागरिक अधिकार वा बाँचन पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन् हुँदा यसरी चुपचाप बस्नु पनि मेरो नैतिकताले दिएन।
मेरो नागरिक अधिकार भनेको चार वर्षमा आउने चुनावमा एकजना नालायकहरू मध्यका कम नालायकलाई भोट हालेपछि अर्को चार वर्ष चुपचाप बस्नु (वा नेपालको स्थितिमा भन्दा त दशकौँ चुप लगेर बस्नु) मात्रै हो त ? । सुन्नेले सुनेन भन्दैमा बोल्नेले बोल्न पक्कै पनि छाड्नु हुन्न् । जहाँ बोल्ने आफैँ बोल्न धक मान्छन्, त्यहाँ सुन्नु पर्नेले झन् झन् आ-फ्नो कर्तव्य बिर्सन्छन् र समस्याको जटिलता झनै बढ्दै जान्छ । कम्तीमा पनि काम गर्नु पर्नेले काम नगरेको स्थिति वा कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने वा जिम्मेवारी ‍बहन गर्नु पर्नेले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा बोल्नेले आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न छाड्नै हुन्न् । अनि मलाइ लाग्छ बोल्नेले बोलेपछि कुने न कुनै माध्यमबाट सो ‘वेबलेन्थ’ सुन्नेसम्म अवश्य पुग्छ । अत: आजैका दिन मैले नेपाल सरकारले सुरु गरेको जन गुनासो सुन्ने ‘हेल्लो सरकार’ मा आफ्नो विचार पठाएको छु । सो पत्रलाई जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको सार्वजनिक इमेल र मेरो ब्लगमा पनि जस्ताको त्यस्तै प्रेषीत गरेको छु । प्रस्तुत छ मैले ‘हेल्लो सरकार’ र प्रम बाबुराम भट्टराइलाई इमेल मार्फत पठाएको पत्र जस्ताको त्यस्तै:
म एकजना साधारण नेपाली, (परिचय लुकाउन खोजेको हैन्, मेरो पुरा परिचय र सम्पर्क ठेगाना समेत तल छ) करिब २ महिना देखि सायद केवल यही ‘साधारण’ नेपाली भएकै कारण मैले तनाव, हडबडि र समस्यामा झेलिरहनु परेको छ । सर्ब प्रथम त, यो समस्या मेरो व्यक्तिगत समस्या नभएकोले नै ‘सरकार’ लाई लेख्दैछु भन्नेमा भ्रम नपरोस् ।
कुरा के भने, सरकारले तोकेको मूल्य र त्यसमा लाग्ने तमाम कर र व्यापारीले थपेका नाफाका भाग अनि ज्यालादारले लिने ज्याला समेत पुरै सुरुमै तिरेर मैले खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्ने गर्थेँ। यस अर्थमा मैले राज्य वा व्यापारीलाई तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकम केही छैन् भन्दा फरक पर्दैन होला । तर विगत करिब २ महिना देखि मैले राज्यले जति मूल्य तोक्छ त्यत्ति नै तिर्दा पनि खाना पकाउने ग्यास पाउन सकिरहेको छैन् ।
स्मरण रहोस्, मैले राज्य विरुद्धको कुनै कसूर गरेको छैन् र राज्यसँग उसले तोकेको मूल्य र सेवामा कुनै छूट, सहुलियत वा मेरो हकदाबी नपुग्ने कन्सेसन समेत पनि मागेको छैन् । तब, के कारणले मैले यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ र मेरो के कसुरको बदलामा, भने जत्ति पैसा तिर्दा पनि सरकारले मलाई अत्यावश्यक सामान उपलब्ध गराएको छैन भन्ने बारेमा सरकारबाटै जानकारी समेत पाउन पनि यो पत्र लेख्दैछु । मलाई लाग्छ, यसरी बिना कसूर सजायको भागीदार हुनु पर्ने स्थिति भनेको अन्याय हो र हालका दिनमा लाखौँ नेपालीहरू यही नगरेको अपराधको सजाय भोग्न बाध्य भएका छन् ।
फेरि पनि स्मरण रहोस्, म एकजना साधारण नेपाली, साधारण भएकै कारण न मसँग ब्ल्याकमा इन्धन खरिद गर्ने हैसियत छ न त राजनैतीक हैकम्, दबाब वा शक्तिको आडमा साधारण भन्दा पृथक रहेर आफ्नो व्यवस्था गर्न सक्ने सामर्थ्य । त्यस अवस्थामा मैले सधै ग्यास किन्ने गरेको पसलमा अहिलेको चल्ती अनुसार आफ्नो ‘नाम’ लेखाएको छु । पसलेका अनुसार आजको मितिबाट करिब २५ दिन पछाडि मेरो नाम आउने छ र त्यति बेला उसँग ‘स्टक’ मा आएको खण्डमा मैले ‘आफ्नो नामको’ ग्यास पाउँछु ।
अब मेरा केही प्रश्नहरु:
१) के प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घर वा सरकारी निवासमा ग्यास सक्कियो भने यसरी नै नाम लेखाउन पर्छ कि ‘अरू कुनै उपाए’ लगाइन्छ ?
२) अरू कुनै उपाए लगाइन्छ भने त्यो उपाए म र म जस्तै लाखौँ नेपालीलाई पनि लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
३) रित्तो सिलिन्डर चुलोमा जोडेर आगो बल्दैन भन्ने सरकारको चेतनामा छ कि छैन ?
४) छ भने अबको २५ दिन जत्ति म र म जस्ता लाखौँ नेपालीले के खालान् र कसरी खालान् भन्ने चिन्ता सरकारलाई छ कि छैन ?
५) चिन्ता छैन भने त सोध्नै परेन, छ भने चाहिँ कस्तो चिन्ता छ र यो समस्या समाधान गर्न सरकारले कस्तो नीति लिँदैछ ? ( कि यो सूचना पनि गोप्य राखिने सूचनाको समूहमा पर्छ ?)
६) अन्तमा सरकारलाई आफू ज्यादै लापरवाह, जनता प्रति अत्यन्त गैह्र जिम्मेवार रहेको कुरा सरकारमा ज्ञात छ कि छैन ? र जनता प्रतिको यो हेपाहा प्रवृत्ति अझ कति सम्म लम्बिन सक्छ ?
माथी पटक पटक लेखि सकेको छु, यहाँ फेरि एक पटक लेख्छु । यो पत्र मैले लेखे पनि पत्रको ‘म’, म मात्रै हैन् र यो ‘म’ ले लाखौँ नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले सरकारले यो पत्रलाई हल्का, आवेश प्रेरित वा मजाकको रूपमा लिँदैन् र यसको यथासिघ्र सही सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
गहना पोखरी काठमाण्डौ
वोधार्थ: bhattaraibaburam@gmail.com (सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई)
दूर्जेय चेतना 11/2/12 7:25 PM
जनताले किनेर खान पनि नपाउने। सबैले भने जती मुल्यमा किनेकै छन् तर पनि निगम घाटा भयो भनेर भनिरहदा लाजै छैन। बिजुली, पानी, ग्यास, शुद्ध र असल खानेकुरा केही छैन। सास फेर्नलाई शुद्ध हावा छैन। काम गर्न, काम छैन। काम गर्ने बाताबरण छैन। ब्यापार ब्यबसाय गर्ने वातावरण छैन। पैसा कमायो भने पछि मन्त्रि भईसकेका र वहालवाला सांसद समेतले अपहरण गर्लान भन्ने डर। सुरक्षाको स्थिति यस्तो छ। चोर डाका र डनहरुको मात्रै देश हुने भो ।
दिलिप सरको यो चिठ्ठीमा मेरो पनि सहमत..
Bishal Gautam 12/2/12 1:51 PM
हैन त्यत्रो ठुलो कसूर गर्ने अनि सजाय न दे भन्न मिल्छ, नेपाली भएर जन्मने त्यस माथी काठमाण्डौ खाल्टोमा बस्ने :P अनि नालायक सरकार बनाउन बारम्बार टन्टलापुरे घाममा बसेर भोट हाल्ने यो भन्दा ठुलो कसुर केही होइन है :D
Dilip Acharya 14/2/12 9:14 AM
नेपाली भएर जन्मनु लाइ भने म कसुर मान्दिन, तर तपाईँले भने जस्तै टन्टलापुरे घाममा लाम लागेर यी भातमाराहरूलाई भोट हाल्नु चाहिँ हाम्रो गल्ती नै हो !
Bishal Gautam 15/2/12 11:01 AM
दाइ संग म पनी सहमत छु, तर यहाँका दिन हरू जसरी बिति रहेका छन त्यसलाइ हेर्दा अनयास फुत्केको मनको उत्वेग हो । सायद यि दिनहरूमा धेरैलाइ यस्तै भएको हुनुपर्छ । बिहान छतमा वसेर कफि खाँदै टलक्क टल्लकेको अन्नपूर्ण श्रृंखला हेर्दा सबै बिर्सन्छु तर खाना खाने बेला देखी न निदाए सम्म थुक्क भन्ने लाग्छ । माता पिता र मातृभुमी सदैव पुजनिय हुन्छन । :)
Nishan 14/2/12 12:15 AM
साँचै नेपाली भएर जन्मनुनै हाम्रो गल्ती हो...अव वा आमालाई गालि गर्नुपर्र्यो :)
Dilip Acharya 14/2/12 9:13 AM
नेपाली भएर जन्मनु गल्ती हैन, तर भातमाराहरूलाई ठूलो मान्छे ठान्नु र यीनले देशलाइ सही तरिकाले चलाउँछन् भन्ने सोच्नु भने हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य हो !। बा-आमालाई हैन तीनै भातमाराहरूलाई नै गाली गर्नु पर्छ !